Kedu ka esi ahọrọ kọlụm ịsa ahụ? - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
1. Metụ ihe: Ị nwere ike imetụ akakọlụm ịsa ahụinwe mmetụta nke elu ihe na mmetụta. Ị nwekwara ike ịlele ma akara kọlụm ịsa ahụ dị mma yana ma enwere mgbape na njikọ ahụ. Ndị a bụ ebe kwesịrị nlebara anya.
2. Nhọrọ dị elu: Ogo ọkọlọtọ nke kọlụm ịsa ahụ bụ 2.2m, nke nwere ike ikpebi dịka ịdị elu nke onye ọ bụla si dị mgbe ịzụrụ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọkpọkọ bụ 70 ~ 80cm n'elu ala, elu nke mkpara ebuli bụ 60 ~ 120cm, ogologo nke nkwonkwo n'etiti ọkpọkọ na kọlụm ịsa ahụ bụ 10 ~ 20cm, na elu nke isi mmiri ịsa ahụ n'elu. ala bụ 1.7 ~ 2.2m. Ndị ahịa kwesịrị ịtụle ohere ime ụlọ ịwụ ahụ nke ọma mgbe ha na-azụrụ. nha.
3. Nyochaa nkọwa na ngwa: Lezienụ anya na ngwa ngwa. Ị nwere ike ịhụ ma enwere trachoma ma ọ bụ mgbawa na nkwonkwo. Ọ bụrụ na enwere trachoma, mmiri ga-agbapụta mgbe mmiri gafesịrị, mgbaji siri ike ga-eme.
4. Lelee mmetụta nkekọlụm ịsa ahụ: tupu ịzụrụ, jụọ n'ụzọ doro anya ihe nrụgide mmiri chọrọ maka ngwaahịa ahụ, ma ọ bụghị ya, ọ gaghị adị irè mgbe etinyere kọlụm ịsa ahụ. Ị nwere ike buru ụzọ lelee nrụgide mmiri, ma wụnye moto na-ebuli elu ma ọ bụrụ na nrụgide mmiri ezughi oke.
Nke gara aga:Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na isi ịsa ahụ nwere ntakịrị mmiri
Osote:Ihe na-akpata mmebi nke eriri ịsa ahụ na ụzọ nrụzi